M/weyne Shariif oo maanta lagu wado in uu khudbad ka jeediyo golaha QM. – Radio Daljir
M/weyne Shariif oo maanta lagu wado in uu khudbad ka jeediyo golaha QM.
New York, Sept 25 – M/weynaha dawladda KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed, ayaa lagu wadaa maanta Jimce ah in uu khudbad dheer ka jeediyo kulanka golaha guud ee QM ee ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka.
M/weyne Shariif, ayaa la filayaa khudbaddiisa maanta ee uu ka akhrin-doono shirka golaha guud ee Jimciyadda qaaruumaha ka dhaxaysa, in uu ku soo qaato amaba uu kaga hadlo xaaladda cakrin ee ka taagan dalka Soomaaliya.
Md. Shariif, ayaa sida ay sheegayaan warar ku dha-dhaw, waxaa uu si faah-faahsan uga hadli doono arrimaha ammaanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha oo dhammaan la aaminsan-yahay in ay yihiin qodobada curyaamiyey dawladdiisa.
M/weynuhu waxaa kale oo uu maanta diiradda ku saari-doonaa hadalkiisa kaalinta beesha caalamka ee ku aaddan gacan-siinta dawladdiisa, waxaana filayaa in uu dhaliilo u soo jeediyo wadamada reer Galbeedka, isagoo ku dhaliilo doona sida ay uga gaabiyeen kaalmooyin dhaqaale oo xilli hore laga sugayey in ay ku saacidaan dawladdiisa..
Waftiga dawladda Soomaaliya ee ka qayb-galaya shirka loo dhan-yahay ee QM ee uu horkacayo m/weyne Shariif, waxaa ka mid ah wasiirrada maaliyadda, arrimaha dibadda iyo gaadiidka, waxaana intii ay ku sugnaayeen Newyork, ay kulamo caadi ah la yeesheen qaar ka mid ah madaxda beesha caalamka, oo ay ku jiraan madax carbeed, kuwo afrikaan ah, Mareykanka iyo wakiillo ka tirsan QM.
Waa markii ugu horraysay m/weyne Shariif uu ka qayb-galo kulanka golaha loo dhan-yahay ee QM tan iyo markii m/weynaha Soomaaliya loo doortay bishii Jannaayo ee sanadkaan.